अस्ट्रेलियाको बोर्डर कहिले खुल्छ ? जति धेरै तपाईं अनेक देशका बोर्डरहरूसँग आफ्नो करिअरको गाँठो कस्दै जानुहुन्छ त्यति धेरै निरीह बन्दै जानुहुनेछ । डिप्रेसनले वैकल्पिक सम्भावनाहरूको महत्त्व मेटिदिनेछ । त्यो ज्वरोमा, आफैँलाई पानीपट्टी लगाउन सक्नुभएन भने ? विवेकले होस् वा विज्ञानले कोभिड १९ लाई नजितेसम्म मानवीय मूल्यमान्यता कहीँकतै देख्न पाइने छैन २१ वैशाख, २०७८ 12 min read Share
वैदेशिक अध्ययन र अभिभावकको भूमिका अभिभावक सन्तानको प्रगतिमा सारथि र बाधा दुवै बन्न सक्छन् । के बन्ने, तपाईंको मर्जी । उद्देश्य मात्रै छैन, अन्योल पनि छ । सपना छ, उचित योजना छैन । यहीँनेर सम्भव भएसम्म अभिभावक स्वयम्‌ले पनि परामर्श दिन सक्नुपर्छ १५ चैत, २०७७ 10 min read Share
प्रचण्ड कमरेडसँग कल्पसंवाद दाइ भएर बहिनीहरूप्रति त्यति धेरै गैरजिम्मेवार हुन मिल्थ्यो मिल्थेन ? वैचारिक सनकको आगोमाथि जीवनसाथीलाई त्यसरी खाली खुट्टै हिँडाउनु हुन्थ्यो हुन्थेन ? सन्तानमाथि समेत निजी सपना लादेर त्यसरी जनयुद्धको घनचक्करमा पार्नु कति सही थियो ? ५ फागुन, २०७७ 18 min read Share